Sweden oo kordhiyay xayiraada saaran xuduudaheeda. - NorSom News
Sweden oo kordhiyay xayiraada saaran xuduudaheeda.
Dawladda dalka Sweden ayaa wakhti ku dartay muddadii la mamnuucay in dalkaas safar lagu yimaado, waxaana hada ay xuduudaha Sweden sii xirnaan doonaan ilaa laga gaaro 15-ka bisha juun, sida uu shir jaraa’id shaley ku sheegay reysulwasaaraha Sweden, Stefan Löfven.
Xayiraadda cusub ee safarrada lagu tago Sweden ayaa timid kadib talo bixin ay keeneen Guddiga Talo bixinta Yurub iyo gudiga la dagaalanka cudurrada faafa, iyada ujeedada lagu sheegay inay tahay sidii loo dhimi lahaa faafidda fayruska corona.
Dalka Sweden ayaa ah dalka uu dhimashada ugu badan ka geystay xanuunka Corona dalalka Nordica, waxaa ilaa hada dalkaas xanuunka Covid-19 u geeriyooday 3 529 qof.
Previous articleSoomaalida Norway oo 554.000 u uruuriyay gurmadka Qardho.
Next articleAkhri Jadwalka aayar u qaadista xayiraadaha iyo sharciyada cusub oo af soomaali ku qoran.